Macmacaan Rooti ah oo Cusub leh ayaa la sameeyey oo leh Nuts iyo Spices
Macmacaanka American Roodhi degdeg ah
Macmacaan Rooti ah oo Macaan iyo Cadaan leh
Ma jiraan wax la yiraahdo boorash wanaagsan oo jilicsan. Waxay yihiin kuwa ugu fiican marka aad qaniinto iyaga iyo dribbles juice hoos garkaaga. Taasi waa nooc ka mid ah timirta aad rabto qoyaankaas. Haddii aadan heli karin noocaas, waxaad isticmaali kartaa fersken ama qasacadeysan. Haddii aad sameysid, waxaan soo jeedinayaa in lagu daro shaah yar oo laga soosaaray burcad ah oo lagu daro dhadhan badan.
1 qaado oo budo dubista
1 qaado shaah
1 qaaddo shinaal (ama qorfe)
1 koob oo ciriiri ah (ama caato, si khafiif ah)
1/2 koob oo subag (jilicsan)
1 3/4 koob sonkor ah
1 qaado oo basbaas ah
2 1/4 koob oo fersi ah (bislaado)
Kuleylka foornada ilaa 325F.
Dareemo oo ku dar laba duubo 9x5 rooti rooti.
In baaquli weyn, oo leh xadhig xadhigga isku daraan bur, dubista dubista, baking soda, cusbo, sinjibiil iyo jar jartey nuts. Qaado.
In baaquli weyn, kariimka subagga iyo sonkorta. Iska ilaali ukumaha, hal mar waqti isku dardargeliya ka dib marka lagu daro kasta. Marka xigta, isku walaaq baastariga iyo ku dar shaandhada udubyada qoyan.
Si tartiib ah ugu dar koobiga koobi hal koob hal koob waqti. Isku qas dhammaan ilaa inta qoyan.
Si siman u kala qaybi dhererka u dhexeeya labada digaag.
Dubo cuntada kibista ugu yaraan 1 saac ama ilaa baaritaanka la sameeyo. Ku qosl xayndaabyada 10 daqiiqo qafiska siligga. Kibisyada u soo jiid kabka si aad u buuxiso qaboojinta.
Dufanka la gooyey ama la gooyey, lakabyo la qaboojiyey ayaa la isticmaali karaa, lakiin labadoodaba waa in la miiro intaan la nadiifin. Haddii aan la miirin, kibisku wuxuu noqonayaa mid qoyan oo aan si buuxda u dubi karin.
Kolestarool 33 mg
Carbohydrateska 23 g
Taariikhda Buste Quick Quick
Beerka laga sameeyey Foosto Beerka laga sameeyey
Macmacaanka Raisin Raisin Cake
Caanaha lagu daro Sweet'N Low Sugar
Cuntada caadiga ah ee Faransiiska Bisque
Miraha iyo Kale Salad
Cajuusta caleenka ama caleenka (Palacinke)
Crazy Pizza Crazy
Isku Xirin Khudaar Cunto leh Ham
Greiley Greens iyo Recipe Kale
Hilibka Hilibka ah
Cuntada Gaarka ah waxay ka heleysaa miisaaniyad ganacsi Joe's
Crock Pot Khudradda Cabbitaanka
Macmacaanka Cretan Holiday Season Cuntada iyo Quraacda macmacaanka
Cunto caafimaad leh
Liiska Cuntada ee Fudge